Instagram တွင်မည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။ နည်းလမ်းအားလုံး | Gadget သတင်း
Instagram သည်ယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများစွာအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပြသနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းလူမှုကွန်ယက်တွင်အကောင့်တစ်ခုထားရှိခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ လျှောက်လွှာတွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်မည်သို့မည်ပုံမသိသောအသုံးပြုသူများအချို့ရှိနိုင်သည်။
၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Instagram တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ဖွင့်နိုင်သည့်နည်းနှစ်နည်းရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်တို့တွင်အချို့သောသင်တို့အဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းရှိသည်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကြှနျုပျတို့ရရှိထားသညျ့နညျးလမျးနှစျခုကိုသိရခွငျးသညျကောငျးလှ၏
2 သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုသုံးပါ
3 ဘယ် option ကအကောင်းဆုံးလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောပထမဆုံးနည်းလမ်းမှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာတွင်အချက်အလက်များ၏စီးရီးရိုက်ထည့်ပါ၊ နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုပြီးအကောင့်တခုဖွင့်လို့ရတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ လူမှုရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသွားရမယ်၊ ဒီ link။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို Instagram ကကျွန်ုပ်တို့အားမေးလိမ့်မည်။
အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခု (သို့) ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု (လူတိုင်းကသူတို့ဆန္ဒရှိသည့်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ကြသည်)
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သာပြုလုပ်ရသည် အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဤအချက်အလက်ထည့်သွင်းပါ ဒီလမ်းအတွက်လျှောက်လွှာ၌တည်၏။ ဒေတာများကိုထည့်သွင်းပြီးပါကဝက်ဘ်မှလုပ်ဆောင်ပြီးပါကနောက်ထပ်အပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သာမန်အရာမှာမမှန်ကန်သောအချက်အလက်များ၊ ဥပမာ - အသုံးပြုသူအမည်ပြီးသားသို့မဟုတ်အီးမေးလ်တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သောအကောင့်တစ်ခုရှိလျှင်၎င်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ဤအရာအလုံးစုံဒေတာလျှောက်လွှာတွင်ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့အကောင့်ဖန်တီးထားသည်။ သင်၏ပရိုဖိုင်းရှိသည့်နေရာတွင် Instagram ကိုဖွင့်လိမ့်မည် ဘယ်မှာအတူတူပင်၏ configuration ကိုအားလုံးအချိန်များတွင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်အကောင့်ကိုလူမှုကွန်ယက်တွင်ဖန်တီးထားပြီးဖြစ်သည်။ သင်အကောင့်တစ်ခုပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်း အတူတူပင်၏စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေး (သို့) အနုပညာရှင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြစ်သည်
သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုသုံးပါ
မင်းသိတဲ့အတိုင်း \_ t Instagram ကို Facebook ကနှစ်အနည်းငယ်အထိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လူမှုကွန်ယက်နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားသော (သို့) နှစ်ခုအကြားပေါင်းစည်းမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အခြားလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုပေါ်တွင်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက်သုံးစွဲသူများအားသူတို့၏ Facebook အကောင့်ကိုအကောင့်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ဒီတော့နှစ်ခုလုံး profile များကိုဤလမ်းဆက်စပ်နေကြသည်။ ၎င်းသည်အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊
ဒါကတကယ်ကိုရိုးရှင်းပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်ပဲကြာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုကွန်ယက်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ရမည်။ ဒီ link။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 'Facebook မှာအတူ Login«, အပြာရောင်ခလုတ်ကိုအပေါ်ပြသ။ ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Facebook အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်းအမည်မှာလုံး ၀ လုံခြုံမှုရှိသည်။
၎င်းသည်နှစ်သိမ့်မှုများစွာပေးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူအမည်ကိုရှာရန်မလိုလျှင်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖိုင်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှစ်ခုရှိရန်ရွေးချယ်စရာကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည့်အပြင်၊ ပိုမိုလွယ်ကူသည့် login ကိုအမြဲတမ်းခွင့်ပြုထားသည်သို့မဟုတ်အမည်သည်အတူတူဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ပရိုဖိုင်းတွင်ပုံတစ်ပုံကိုသင်ပေးလိုလျှင်ကူညီနိုင်သည်။
စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးပါကသင်သည်ဖုန်းပေါ်တွင်အက်ပ်များကိုဖွင့်သောအခါရွေးချယ်စရာများစွာပေါ်လာမည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသထားသောရွေးချယ်စရာတစ်ခု Facebook ဖြင့်ဝင်ရန်။ သင်၏ဖုန်းတွင် Facebook အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပြီးဖွင့်ချိန်တွင်ဖွင့်ပါကစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းသင်သည် Instagram သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ထပ်တူပြုလိမ့်မည်။ စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းတွင်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ဘယ် option ကအကောင်းဆုံးလဲ?
အခြားတစ်ခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုတကယ်တော့မရှိဘူး။။ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးကကျွန်တော်တို့ကို Instagram မှာအကောင့်တစ်ခုခွင့်ပြုထားတယ်၊ အဲဒါကငါတို့လိုချင်တဲ့အတိအကျပါ။ သုံးစွဲသူများစွာအတွက် ၄ င်းတို့၏ Facebook အကောင့်ဖြင့်စည်းညှိနိုင်ခြင်းကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအလွန်အသုံးဝင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကောင်းစွာအသုံးချရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။
အကယ်လို့သင့်မှာ Facebook အကောင့်မရှိဘူးဆိုရင်၊ မင်းရဲ့ Instagram အကောင့်ကိုခြစ်ရာကနေသင်ဖန်တီးရလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုကြာမြင့်စွာမယူရ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပျော်မွေ့နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » Instagram တွင်မည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း
UE Wonderboom 2. အသစ်ကို ပိုမို၍ အားကောင်း၊ အပြင်အားသစ်အပြင်အဆင်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
Joan Monrabá (Colt) သည်အနာဂတ်ဆက်သွယ်မှုမီဒီယာ၌စီးပွားရေးဆက်သွယ်မှုအကြောင်းပြောဆိုသည်